Qantas to Put More Experienced Crew on Board World’s Longest Flights | Myanmar Business Today
Home Business Regional Qantas to Put More Experienced Crew on Board World’s Longest Flights
Qantas Airways plans to have more experienced pilots on board the world’s longest non-stop flights than on its current long-haul flights for the first 18 months as it evaluates fatigue, said sources with knowledge of the matter.
The airline said it could buy up to 12 Airbus SE A350 planes for the commercial flights of up to 21 hours that includes the Sydney-London route, but the deal depends on pilots voting to approveapay agreement in March.
Qantas said Australia’s aviation regulator had provisionally advised it saw no regulatory obstacles to the flights, which could extend pilot duty times to as long as 23 hours to account for potential delays. The Civil Aviation Safety Authority did not respond immediately toarequest for comment.
Rival Singapore Airlines uses two captains and two first officers on its nearly-19 hour flights from Singapore to New York.
Qantas has offered to crew non-stop flights to London and New York with one captain, two first officers and one second officer for the first 18 months so it can evaluate fatigue-related issues, according to its pilot union newsletter, two pilots andacompany source familiar with the matter who were not authorized to speak with the media. Qantas declined to comment.
“I am pretty confident that we will get agreement in the end,” Susz told Reuters on December 16. “I don’t think the issues are insurmountable but there areacouple of elements to the Qantas proposal that we find extremely unpalatable and we will avoid those the best we can.”
Qantas Airways သည် ‌ခရီးရှည်ပျံသန်းသည့် လေယာဥ်များအတွက် အတွေ့အကြုံရှိရှိသော လေယာဥ်မှူးများ ခန့်ထားရန် စီစဥ်နေကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုသည်။
ဆစ်ဒနီမှ လန်ဒန်သို့ ပျံသန်းသည့် ခရီးစဥ်များအပါအဝင် ပျံသန်းချိန် ၂၁ နာရီကြာမြင့်သော လေယာဥ်ခရီးစဥ်များအတွက် Airbus SE 1350 လေယာဥ် အစီးရေ ၁၂ စီး ဝယ်ယူသွားနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်းက ပြောဆိုထားသည်။ သို့သော် အဆိုပါ လေယာဥ်ဝယ်ယူရေးမှာ မတ်လအတွင်း ငွေပေးချေရေး သဘောတူညီချက်ကို အတည်ပြုရန် လေယာဥ်မှူးများ၏ မဲပေးမှုအပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။
“ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လေယာဥ် ဝယ်ယူဖို့ အမှာစာ မတင်ရသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းကိစ္စ ရှင်းလင်းစရာတစ်ခုရှိနေသေးလို့ပါ” ဟု Qantas ၏ လေယာဥ်မှူးချုပ် Dick Tobiano က ပြောသည်။
သြစတြေးလျ၏ လေကြောင်းဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်ဌာနကတော့ လေယာဥ် ဝယ်ယူရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဥ‌ပဒေကြောင်းအရ အတားအဆီးမရှိကြောင်း သတိပေးထားသည်ဟု Qantas က ပြောသည်။ အဆိုပါ လေယာဥ်ခရီးစဥ်များသည် လေယာဥ်နောက်ကျချိန်အပါအဝငါ် လေယာဥ်မှူးများအနေဖြင့် နာရီပေါင်း ၂၃ နာရီမျှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရနိုင်သည်။
လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် လန်ဒန်-ဆစ်ဒနီ စမ်းသပ် လေယာဥ်ခရီးစဥ်နှင့် နယူးယောက်-ဆစ်ဒနီ စမ်းသပ် လေယာဥ် ခရီးစဥ်များတွင် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည့် လေယာဥ်မှူးများနှင့် လေယာဥ်မောင်/မယ် အဖွဲ့၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းများ ကောက်ယူထားသည်။
Qantas ၏ လက်ရှိ ခရီးရှည်လေယာဥ်ခရီးစဥ်များတွင် ကပ္ပတိန်တစ်ဦး၊ ပထမအရာရှိ တစ်ဦး၊ ဒုတိယအဆင့် အရာရှိနှစ်ဦးပါဝင်သည်။ ဒုတိယအဆင့် အရာရှိနှစ်ဦးမှာ ပျံဝဲသည့် အမြင့်လောက်တွင်သာ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး လေယာဥ် အဆင်းအတက် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ပြိုင်ဘက် Singapore Airlines ကတော့ ၁၉ နာရီနီးပါး ကြာမြင့်သော စင်ကာပူမှနယူးယောက်သို့ လေယာဥ်ခရီးစဥ်အတွက် ကပ္ပတိန်နှစ်ဦး၊ ပထမ အရာရှိနှစ်ဦးကို အသုံးပြုသည်။
Qantas သည် ပထမ၁၈ လအတွက် လန်ဒန်နှင့် နယူးယောက်သို့ ပျံသန်းသည့် လေယာဥ်ခရီးစဥ်များတွင် ကပ္ပတိန်တစ်ဦး၊ ပထမအရာရှိနှစ်ဦး၊ ဒုတိယအဆင့်အရာရှိနှစ်ဦးကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။
SOURCEJamie Freed (Reuters)
Previous articleIn Macao, China SeesaModel foraRebellious Hong Kong
Next articleThai Chicken Exports to China Set to Rise